Ukuthenga oku-intanethi: Izinhlelo zokusebenza ezinhle ze-10 ze-iPhone ne-Android | Khetha okuphephile
Ukuthenga ku-intanethi: Izinhlelo zokusebenza ezinhle ze-10 ze-iPhone ne-Android
Akukatholakali kakhulu ukuthi ukuthengwa kwe-intanethi akukavele kwenziwe kwikhompyutha futhi manje kuyatholakala ezandleni zabasebenzisi be-smartphones e-Android noma e-iPhone. Ngaphandle kwezithuthukisi ze-ecommerce ezinike amandla ukuthi isayithi lifinyelele kumadivayisi eselula, inamba yezicelo zikuvumela ukuba uthenge kalula izingubo zangaphandle, ama-electronics, izesekeli nezinto.
Yingakho siqoqe i-10 yezinketho ezinhle kakhulu ezitholakala kuhlelo lokusebenza le-Google ne-Apple. Umphumela we ukusesha kwethu kungezansi nje. Thola ukuthi yiziphi izinhlelo ezinhle zokuthenga ze-10 eziku-intanethi!
Enye yezinhlelo zokusebenza ezithengi ze-inthanethi ezilula futhi ezilula ezitholakalayo kumafoni weselula. Ngenguqulo yesiPutukezi, i-Wish ikuvumela ukuba ungenise noma yikuphi uhlobo lomkhiqizo, kungaba yi-electronic, izingubo zokugqoka noma izinto zokuhlobisa. Inqubo yokuthenga nokucinga ilula futhi iqondile, ngaphandle kokwazi okuningi noma okujwayele izinhlelo zokusebenza zohlobo. Lesi sihloko se-AppTuts inikeza umhlahlandlela ophelele mayelana nendlela yokusebenzisa i-Wish ukuze wenze ukuthenga kwakho ku-intanethi nokuthi yini isicelo esilandelayo, esingalandwa ngaso -Google Play ou App Store.
Uma ungakakulungeli ukulanda izicelo ezihloselwe ukungenisa imikhiqizo efana ne-Wish, Buscapé yisisombululo sikazwelonke esingase sibe mnandi kakhulu. Uhlelo lokusebenza akulona isitolo esivamile, lusebenza kangcono njengomlingisi wamanani, okukuvumela ukuba useshe isitolo esihle kakhulu ukuthenga umkhiqizo othize.
Ububanzi bezinto ongabheka kulolu hlelo lokusebenza buhlukile, futhi luhlanganisa izingubo, izinto ze-elektroniki noma izesekeli nemikhiqizo yokuhlobisa, phakathi kwamanye amaningi. Uhlelo lokusebenza lwe-Buscapé lutholakala kokubili i-Android bangaki for iPhone.
Enye yezitolo ezinkulu kunazo zonke ezithengwa ku-intanethi emhlabeni nazo ziyatholakala njengenhlelo lokusebenza Android ou iOS. Ngenxephelo engalindeleki esitokisini esaboniswe kumathengi awo we-TV, i-OLX igxile ekusungulweni kokuthengiswa kwemikhiqizo esetshenzisiwe noma ingcebo. Ububanzi balo buyingxenye enkulu kunalolu hlu, njengoba kuvumela abasebenzisi bayo ukuba bathengise zonke izinhlobo zezinto, kuhlanganise izimoto, izindlu namafulethi.
I-4. Imakethe yamahhala
Ilandelwa i-OLX ifika i-Mercado Livre, iphayona elisitolo se-intanethi eBrazil. Kwaqaliswa ngisho nangaphambi kweminyaka engu-2000, isayithi yavela futhi yafika ukudala isikhwama sayo se-digital esibizwa nge-Mercado Pago. Ngaphezu kwalokho, ukufinyeleleka kwalo kuye kwandisa amafoni namathebulethi Uhlelo lwe-Android, ngaphandle kwe iPhone ne-iPad. Ngaleyo ndlela, ungathengisa izinto zakho ezisetshenzisiwe noma wenze ukuthenga ezweni ngqo kusuka kuhlelo lokusebenza.
I-5. Wonke Amalungelo Agcinwe.
Ukubuyela kuzinhlelo zokusebenza zokuthengwa kwe-inthanethi ezikhethekile ekuthengisweni, i-AliExpress ayikwazanga ukushiywa ohlwini. Nakuba kungewona uhlelo lokusebenza olusha - kusukela kwezinye izingosi nezinkampani kakade zinikeza ngensizakalo yokungenisa i-intanethi ngaphambili - i-AliExpress yayiyinhloko ngokuyinhloko ekuthandeni kwayo. Ngesistimu efana nesifiso, ungafinyelela isayithi noma ulanda uhlelo lwakho lokusebenza Android e iPhone.
Ibuye ibe nokuhumusha isiPutukezi nokulinganiselwa kwamanani ngoqobo. Kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi lezi zinsizakalo, ngisho nokubonisa intengo ku-reais, namanje zikhokhisa ngama-dollar. Ngakho-ke kuhle ukuthi uqonde ukuthi inani elikhona lapha lilinganiselwe, kepha lingase lihluke esitatimendeni sakho sekhadi lesikweletu. Ungaphuthelwa kwenye Izindlela ezingcono ze-5 ezifisayo ngaphezu kwe-AliExpress.
Enye yezinhlelo zokuthenga ezithengisa kakhulu ze-intanethi zebalandeli bezemidlalo nezemidlalo. Isitolo se-intanethi sigxile ekuthengiseni lolu hlobo lomkhiqizo lutholakala ngesimo sesicelo Android ou iOS. Kuyo, kungenzeka ukucinga imikhakha ehlukene kunazo zonke zokugqoka - njengezicathulo, ama-sweaters kanye nezesekeli - kanye nobukhulu bawo. Uhlelo lokusebenza lwe-Kanui lunezaphulelo kanye nokukhushulwa okukhethekile kwabasebenzisi bezinhlelo zakho zokusebenza.
Umncintiswano oyinhloko we-Buscapé, i-Zoom iphinde ibe nesicelo sokusiza abasebenzisi bayo ukuba bathole amanani angcono kakhulu omkhiqizo abawufunayo. Ukusetshenziswa kwalo kufana nalokhu komncintiswano walo omkhulu, usebenzisa injini yokusesha ukuthola imikhiqizo ngokwegama elingukhiye elisetshenzisiwe. Ngemuva kokuthi unikeze "Kulungile" ekusesheni, izobonisa izinto ezitholakalayo nezitolo zazo, ezivumela ukuba zilandele intengo ephansi, phakathi kwabanye. Funda kabanzi mayelana nohlelo ngokulanda ku- -Google Play ou App Store.
Enye yezinhlelo zokusebenza zokuthenga ezithengisa kakhulu ku-intanethi ukuthenga imikhiqizo evela e-China, iBanggood inenqubomgomo enobudlova yokulanda amakhasimende amasha ngokunikeza i-10% isaphulelo kubasebenzisi abasha. Njenge-Wish and AliExpress, iBanggood ineqoqo elibanzi lezinto ezitholakalayo ngezigaba eziningana.
Le nsizakalo ibalwa cishe nemikhiqizo ehlukene ye-150.000 etholakala esitolo sakho futhi iyakwamukela izinkokhelo ekhadini lesikweletu kanye nasesikhwameni sebhange sabaseBrazil. Layisha uhlelo lokusebenza ku Android ou iPhone ukuqala ukuthenga kwakho.
Inethiwekhi enkulu yokudayisa yaseBrazil iphinde ivumele ukuthengwa kwemikhiqizo yayo ku-inthanethi ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza lweselula Android ou iOS. Njengokwesayithi, uhlelo lokusebenza lukuvumela ukuthi upheqa ngemali emikhulu yemikhiqizo etholakala esitolo, ikuvumele ukuthi uthenge ngezinhlobo zendabuko zokukhokha futhi uthole izibikezelo zempahla kanye nesikhathi sokulethwa. Uhlelo lwe-Americanas lunezitolo zomlingani ezithengisa imikhiqizo yazo kusayithi, ukwandisa iqoqo layo elincane kakade lezinto.
Phakathi kwezinhlelo zokusebenza ezithenga ezitolo, kungenzeka ukuthi ucabangele u-Enjoei njengenye yezinto zakamuva kakhulu. Nakuba iningi lezinsizakalo ezichazwe kulolu hlu livela kumasayithi e-ecommerce noma izintambo zokuthengisa, u-Enjoei wacatshangwa futhi wadalwa njengohlelo lokusebenza. Yingakho ukuhamba kwakho kungcono kunezinye izinhlelo zokusebenza, noma ngabe nazo ziqukethe iwebhusayithi.
Njengoba igama layo lisho ukuthi, ukugcizelela kuka-Enjoei kuwukuthengisa nokuthenga izinto ezisetshenzisiwe, ngokubheka ngokukhethekile imbonini yezemfashini. Ngisho noma isitolo esivamile - ngomqondo wokunikela ngemikhiqizo ehlukahlukene - uhlelo lokusebenza likuvumela ukuba ubonise ubukhulu obuhlukahlukene lapho izingubo noma izicathulo zitholakala khona, ngokwesibonelo, ukwenza impilo yomsebenzisi ibe lula nakakhulu. I-Enjoei ingalandwa mahhala ku- -Google Play noma nge Isitolo se-App ye-iPhone.
Iyini uhlelo lwakho lokusebenza lokuthenga inthanethi oluthandayo?
Lezi ezinye zeziphakamiso zethu eziphezulu ngakho akudingeki ukuba uye esitolo futhi uthenge konke ngqo kusuka efonini yakho, nje ukudinga ikhadi lesikweletu - futhi ngezinye izikhathi hhayi lokho! - nesignali ye-intanethi. Akuzona kuphela izinketho ezitholakalayo futhi sikumema ukuthi ufunde mayelana nezinye izinketho zohlelo lokusebenza lwe-iPhone ne-Android elikuvumela ukuba uthenge ku-intanethi. Vele uchofoze isixhumanisi ukuhambisana nezinhlelo zokusebenza ezintsha bese usetha okuthandayo!
Lokhu okuthunyelwe kumenywa yi-Apptuts, vakashela isayithi ukwazi ezinye izinhlelo zokusebenza zezwe lobuchwepheshe.
Indlela Yokuphrinta Ngokushesha Ku-iPhone Kalula
Amahemuhemu akhombisa ukuthi IOS 13 ngeke ifinyelele i-iPhone 6S ...